CDC: Tsananguro ye 'yakazara jekiseni' inogona kuda kuvandudzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » CDC: Tsananguro ye 'yakazara jekiseni' inogona kuda kuvandudzwa
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Mutungamiriri weUS Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky
Walensky akakurudzira vese vanokodzera vekuAmerican kuti vatore maabooster boots, zvisinei nekukanganisa kwavo mune ramangwana pamamiriro avo ekudzivirira.
Vagari vemuUS vanoonekwa vakabaiwa jekiseni rakazara kana vaine mishonga miviri yekudzivirira Pfizer kana Moderna, kana iyo pfuti inodiwa paJohnson & Johnson jab.
Kana zvikwidziridza zvikazova chikamu cheicho chinodiwa kuti chionekwe 'chakazara kubayiwa jekiseni', vazhinji vakagashira mapfuti avo pakutanga vangangoda kuwana zvinowedzera.
Boosters yemushonga wega wega uripo muUS wakagamuchira mvumo kubva kuCDC neKudya neDrug Administration, asi chete kumapoka anokodzera.
MaAmerican vanoonekwa sevharanzi yakazara kana vaine madosi maviri epiritsi dzePfizer kana Moderna, kana iyo pfuti inodiwa paJohnson & Johnson jab.
Izvi zvinogona kuchinja munguva pfupi.
Sekureva kwaDirector weUS Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, ati iyo agency inogona kunge ichigadzirisa iyo tsananguro yeku "jekiseni rakazara" kurwisa COVID-19, yakatenderwa uye inowanikwa kune booster shots.
Walensky akabvunzwa nhasi-venhau-musangano, kuti avo vanokodzera kukwidziridzwa kupfura vanoda kuwana mamwe madosi ekuti vachengetedze yakazara yavo nhomba.
"Hatisati tachinja tsananguro yekuti 'vakabaiwa zvakakwana,'" akadaro Walensky, achiwedzera kuti kusvika parizvino havasi vese veAmerica vanokodzera kukwidziridzwa.
"Tingangoda kuvandudza tsananguro yedu ye 'kubayiwa zvakakwana' mune ramangwana," CDC director vakadaro.
Kana zvikwidziridzwa zvikava chikamu cheicho chinodiwa kuti chionekwe 'chakazara kubayiwa jekiseni', vazhinji maAmerican avo vakagashira pfuti kwavo pakutanga vangangoda kuwana zvinowedzera kuchengetedza yavo 'jekiseni'.
Booster mapfuti emushonga wese unowanikwa muUS vakagamuchira mvumo kubva ku CDC uye Chikafu uye Dhaka Administration (FDA), asi chete kumapoka akakodzera.
CDC yakabvumidza dositi yevakuru vese vakagashira mushonga weJohnson & Johnson, uye vakuru nevakuru vasina kuzvidzivirira kuzvirwere zveModerna nePfizer.
Walensky neCDC vakazivisa svondo rino vanhu vanogona zvakare kusanganisa uye kuenzanisa booster shots zvakachengeteka. Sangano rakazivisawo nhasi kuti kukodzera kweanowedzera zvichawedzera mumwedzi inotevera.
Walensky akakurudzira chero munhu anokodzera kuwana avo booster mapfuti, zvisinei nezveramangwana kukanganisa kwavo nhomba nzvimbo.
"Dzose dzinoshanda zvakanyanya mukuderedza njodzi yechirwere chakakomba, chipatara, uye kufa, kunyangwe pakati penzvimbo inopararira yeDelta," akadaro CDC Director.
Zvinoenderana neazvino CDC dhata, inopfuura 66% yevagari vemuUS vakagamuchira imwe nhanho yevhavha yeCCVID-19.